Iindwendwe zeNtshontsho zeNtshontsho N Iihambo | Sibizele kwi: 993.702.7574
Ukubulisa kuni ukusuka kwi-Sand Pebbles Tour N Travels - umqhubi we-tourist u-Odisha ochaphazela imiphefumlo yabanqaku ngamaphakethi kunye namasevisi ancedisayo. Uhambo lweeNtshontsho zeNtshonalanga N Iihambo ziye zavunyelwa kwi-1993 eBhubaneswar - isixeko esikhulu esinqabileyo sibizwa ngokuba yindawo yezokhenketho yezokhenketho kunye nokuqhubela phambili okuqhubela phambili kwi-Odisha. I-Sand Pebbles Tour Ii-ofisi zee-Travels zihlala kwiindawo ezikude kwaye zineendawo ezintle.
Inkampani, ngaphezu kweminyaka ibonise ibhola ehamba njengeyona nkampani yokuqala kunye nekhenkethi yokukhenketha ngokukhahla iindwendwe ezihambelanayo kunye neendlela ezivelelekayo zokuqwalasela i-Puri Special Tours, i-North East Tours, i-Boat Cruises, i-Weekend Getaways, i-Bhubaneswar Special Tours, Fumana i-Mini Amazon - iBhitarkanika, Odisha Uhambo lwezoKomoya, u-Chilika kunye no-Odisha Golden Triangle, i-RathaYatra i-Package ekhethekileyo, i-Buddhist India Gateway eya kwi-Odisha, i-Adisha ye-Odisha, i-Exclusive Odisha Tribal Tour, i-Sanctuaries ye-Odisha .... ukukhankanya ezimbalwa. Kukho zombini iipakethi zokutyelela ezilungiselelwe ngaphambili kunye neepakethi ezenzelwe ukhenketho ezinobuninzi obudibanisa ukuthengiswa kwabathengi ababizwa ngokuba yiOudisha Tribal Tours kunye neetempile, iBuddhist Trail Odisha kunye neBhubaneswar - Puri - Konark - nokunye okuninzi ... ..
Uhambo lwamatye e-Sandwill alukho kwiinkonzo ezincedisayo. I nkampani ifake umfanekiso wesithunzi kwindawo Iinkonzo zokuqashisa kweenqwelo kwaye ixhotywe ngeenqwelo ezihamba phambili zeemoto neemodoka zamaninzi. Ukutyelela kweNtsundu yeNtsundu akushiyi ilitye lokuguqulwa kwamatye ukuze linikeze abathengi bayo banokuyolisa kwaye bagcine isitopu salo kunye nakho konke okwangoku kwishishini likhenketho. Inkampani iye yandise amasebe ayo okubeka i-setting-up ku-Puri, eGopalpur, Bhitarkanika, EDelhi naseKolkata kwimigudu yayo enzima yokufikelela kubathengi abangaphezulu.
Uhambo lweeNtshontsho zeNtshonalanga N Iihambo ziyabonwa nguMphathiswa wezokhenketho, iGovt. waseIndiya njengequmrhu elixhotyiswayo lokubonelela ngeenkonzo zokutyelela umgangatho kubakhenkethi. Ikwavunyelwa yi-IATA. Le nkampani ilungu leemibutho ezihloniphekileyo ezifana ne-IATO, iUFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI kunye ne-TAAO.
I-Sand Pebbles, uvulindlela we-tour operator U-Odisha uyazibophezela ekunikezeni iinkonzo ezizodwa kunye neenkonzo ezihambelana nezohambo, ngokubambisana neepardidi eziguqukayo zoshishino lokhenketho. Uhambo oluphakamileyo kunye nokulungiswa kwezibhedlele ezenziwa ngokugqithiseleyo ngeqela elifanelekileyo kunye neengcali zohambo lweeNtsundu zeNtshontsho ziye zaba yixabiso elihlala lihlala lixesha, ngokuphindaphindiweyo ukukhawuleza umfanekiso weskrini. Kwimigangatho yokuphuhliswa kwemveliso kunye nokukhuthazwa, inkampani iye yahamba iikhilomitha ezinokuxhaswa kweqhinga lokukhuphisana. Iqela elinamava kakhulu licinga, imveliso, kwaye libeka kwindlela yokusebenza; iintlobo ezahlukeneyo zezokhenketho kunye nemisebenzi eyenza ukuba abathengi bajabule. Ezi zinto ziquka i-eco, inkcubeko, okomoya, ukuzonwabisa, izilwanyana zasendle kunye nama-MICE, ngoko kukutya ukutya kunye neenqweno zabathengi abahlukeneyo.
I-Odisha idonsa ukuvakasha okungabonakaliyo kwindwendwe ephuma kulo lonke ihlabathi. Ukutyelela kweNtshonalanga kwintlanzi kusebuncinci bezinto ukususela kwiminyaka elishumi nesigxina ukuphatha inani elincinci labakhenkethi kunye nokubonelela iiphakheji ezihambelayo, ukuncedisa uhambo, kunye nenkxaso yokuxhasa. Iziphakamiso zezoshishino ezikhulayo ezibandakanya amaqhinga amnandi, intsebenziswano enobuchule, kunye neo-amathuba akhulise ukuma kweethambeka zeNtshonalanga ngokukodwa njengenkokeli yezorhwebo e-East India. Inkqubo eyenziwe yenkampani ukuqinisekisa ukulawulwa kwekhwalithi engaphethekiyo kunye nokuhanjiswa kweenkonzo eziphezulu kukhangele ukuncoma kwiindawo ezahlukeneyo.
Uhambo lweeNtsundu zeNtshontsho luqhubekela phambili kunye nomoya ongenakulungiswa. Ubukhazikhazi be East India kwaye North East India kukukhawuleza, nje ukucofa kwi-chic kunye ne-swanky platform eyenziwa yiSand kunye nohambo lwamatye kunye neqela lethu lobuchule kunye ne-penchant eyingqayizivele yokugqwesa ukuqinisekisa ukuba namava anelisayo.
Ukutyelela kweNtshontsho yeNtshonalanga kunebhoksi egciniweyo egcwele iiphakheji ezithandekayo kuwe. Yiba yizilwanyana zasendle, inzala ekhethekileyo, okomoya, i-Pilgrime, yeNkcubeko kunye neGugu, uLonwabo, IMICI .... kukho ezininzi kumakhadi okubangela ukunyamekela kwakho. Ukukhetha kwakho kuxabiseke kakhulu kwiTyelelo leNtshontsho yeSandle - nokuba yiThupha elizimeleyo leTyelelo okanye iNkqutyana yokuThuthukiswa kweNkcazo ... sinezona zinto zihamba phambili kuwe.
Kule minyaka, uhambo lweeNtsundu zeNtsundu luye lwasekela ubukho balo obuphezulu njengomqhubi wongqamaniso wokutyelela u-Odisha kunye nomnikezeli weNkonzo yeNqashiso yeMoto.
Ngenxa yecandelo layo le-on-dot, elikhawulezayo kunye neCandelo leeNkonzo zeCar and Coach kwi-beck yefowuni - Ukutyelela kweNtsundu yeNtsundu malunga nexesha eliye lavela njengegama lomndeni kwaye lathandeka kumaqela e-Odisha. Iinqwelo ezidumileyo zeenkampani zinezixhobo ezingaphezu kwe-60 zomoya ezinokuzenzekelayo ezibandakanya i-Mercedes Benz, i-Skoda Superb, i-Honda Civic, i-Toyota Corolla, i-Honda City, i-Toyota Innova, i-Tata Indigo, i-Mahindra Logan, i-Mahindra i-Scorpio, i-Mahindra i-Bolero, iTata Indica , Umhambi weTem, i-Mini-Vans kunye nabaqeqeshi. Kwinqanaba elinobuchule kunye nabakhenkethi abaqhubi abanikela ngempahla yenkampani. Inkampani inkolo ithatha impendulo evela kubaxhasi ekusebenzeni kwabaqhubi kwaye ihlala ibeka ingqalelo kwiikhowudi zokuziphatha. Abaqhubi banikwa iifowuni kwaye bahlala beqhagamshelana nabaphathi.
Amanyathelo okuhanjiswa kwamakhasimende aseSand aquka ukubonelelwa kwebhotile yamaminerari, iphephandaba leNgesi, i-icebox, iphepha leetyhuse, ibhokisi lokuqala kunye ne-umbrella kuzo zonke izithuthi. Zonke izithuthi zifakwe izibhanki zokuhlala kunye nezinye izixhobo zokhuseleko kunye nezixhobo. Iinkonzo zeCar kunye neCandelo lokuHlaliswa kweeNkxaso zibonelelwa 24X7.
Ukuvumelanisa nesisombululo esiphezulu seeholide ezithintekayo kwiindawo zeeholide ezinokubakho kwiindawo ezisemadolobheni, ukuhanjiswa kweNtshontsho yeNtsundu kumise indawo ebonakalayo eBhitarkanika National Park. Le ndawo yokuhlala eyongezelelekileyo yengqondo yendawo yokuhlala yindawo ehlala kuyo i-'Jungle Resort '. I-Bhitarkanika yindawo yokuhlala engaphandle kwamahlathi aseMangrove aphethwe ngamagqabi amakhulu kunye namatye, e-Kendrapara kwisithili se-Odisha. Enye yezona zityalo ezihamba phambili kwi-Indiro, i-Bhitarkanika ihlala kwiintlobo ezahlukeneyo zendalo kunye nezilwanyana. I-Sand Pebbles IJungle Resort iye yaqulunqwa ukuba iqhube kwiityelele ukuba zivelelwe ngobunye kunye nendalo. Esi sikhokelo saguqukile ukuba sibe 'kufuneka sihlale kwindawo' kwindlela yokunyuka kwabafundi. Ukutyelela kweNtshontsho yeNtshonalanga kwenza uphawu olungapheliyo njenge-arhente yokuhamba ishishini. ISEBE leshishini kwinkampani lixhaswa njenge 'ace of future'. Ukutyelela kweNtshontsho kweNtshonkqo kwenza ukuba ishishini kunye nokuzonwabisa lijonge ngakumbi. I-Odisha yindawo ehambayo yokufuna i-MICE kunye nokuthintela i-market ye-MICE yentshiseko, ityelelo le-Sandwitshi leSand lilungiselele izicwangciso ezininzi. Ubungakanani bokunxibelelana ngokunxibelelwano kwenza ukuba uhambo lweeNtshontsho zeNtsundu lubonelele okanye luvimbele ama-hotel rooms, udibanise ukuhamba ngeengqondo, kwaye uququzelele ukuzizonwabisa kunye nokuzonwabisa kwiindwendwe. Iinkonzo ezinyaniweyo zohambo lweeNtshontsho zeNtsundu ziyakukhawulela ishishini eliqhelekileyo.
I-Sand Pebbles Iziganeko 'n' Iqela lezoLonwabo, iyunithi yeeNtshontsho zeNtshontsho kwiNtshontsho 'n' Uhambo ziyaqatshelwa yiNdwendwe yezoKhenketho, i-Govt. waseIndiya kunye neSebe lezoKhenketho, i-Govt. Odisha. Lephiko lisekelwe kwidolophu-dolophu yaseOdisha - eBhubaneswar. Ulawulo lwemiba lugqithisa njengomsebenzi wokukhenketho. Kukho ukukhishwa kwoshishino lwezehlakalo kwi-Odisha. Ukutyelela kweNtshontsho yeNtshonkcoba kukuziqhenyce ukuba ibe ngumlingani wempumelelo ye-gala yoshishino lolawulo lomcimbi kwi-State. Uhambo lweeNtshontsho zeNtsundu lulungele ukuphakama kwiindawo eziphakamileyo kunye neqela lakhe lobugcisa elinobungqina kunye nolwazi olunamandla. Injongo ephambili yenkampani kukubonelela ngeenkonzo ezikhethekileyo kubaxhasi abaxabisekileyo ngokugxininisa kwi-value based based, amanyathelo axhomekeke kumakhasimende.
Uhambo lweeNtshontsho zeNtshonkco lupapasha iincwadana ezinolwazi kunye neenkcukacha ezipheleleyo kunye nolunye uncwadi oluphangaleleyo olubonakala luhle kakhulu. Iiphakheji ezikhethekileyo zohambo lweeNtshontsho zeNtshontsho zenza i-quotient yesizwe e-Odisha. Iyakhuthaza iintlobo zezobukhenketho bezizwe kunye namathuba okuvakasha abavakhenkethi ukuba babe nobuhlobo obusondeleyo kunye nolwazi oluqhelekileyo lwendabuko oluxhaswa yiintlanga zakwa-Odisha. Iiphakheji zokutyelela iintlanga zeenkampani zivula iintlobo ezikhethekileyo zabemi bomthonyama baseburhulumenteni; zabo iinkqubo ezikhuthazayo kunye namasiko. Abakhenkethi banikezwa ngamathuba amaninzi ukubonela imikhosi yabo enemibala ebhiyozelayo indlela yokuphila eyahlukileyo eyenza ukugcinwa kwelifa elikhethekileyo. Odisha amachashaza kwindawo ephawulekayo kwimephu ye-india ye-Indiya yokuba ibe neyona ntlupheko enkulu yeentlanga. Uninzi lweentlupheko lufumaneka kwizithili zaseKoraput, iRayagada, iNaurangpur, iMalkangiri, iKalahandi, iKhamhamal, iBaudh, iKekharhar, iSundargarh kunye ne-Mayurbhanj. IiNtshontsho zeNtshontsho zeTrb Tours ziquka zonke ezi ndawo kwaye zithatha iinjongo ze-esthétique kunye nokubonakaliswa kwamanqanaba omthonyama. Kwizhenketho ezikhuthazayo zenkcubeko, uhambo lweeNtshontsho zeNtsundu lubonelela ngeephakheji. Yonke imithendeleko iqwalasela kwiinkqubo zodidi lweklasi zenkampani. Abakhenkethi bafumana ithuba lokuphila kwintlangano yeenkcubeko zeOdisha ngexesha leeholide. Ubuqaqawuli kunye nokugcoba kwemikhosi emikhulu yenkcubeko efana nePuri International Festival Festival, kunye noMthendeleko weKonark unika ithuba lokuba abatyeleli baxhomekeke kubungangamsha be-regal.
I-Odisha ineendawo ezininzi zokuvakatsha zasemaphandleni. Ngaphandle kobuhle obuhle bezo ndawo ezihamba phambili zokuvakasha, yintoni ekhohlisayo abakhenkethi yimbali, iindibano zenkcubeko, iimpawu zezenkolo kunye nokubaluleka kwezinto zakudala. Ububanzi bendawo yokukhenketho yasemaphandleni e-Odisha bhengezwa ngamaphakheji akhethekileyo ohambo lweeNtshontsho. Inkampani iyavumelana ngokubaluleka ekuphuhlisweni kwemveliso yenkcubeko kwimihlaba yasemaphandleni njengeRughurajpur. Ikhuthaza abavakhenkethi ukuba bazive bexhamle ngokumalunga nokuphila komthonyama kwimihlali yasemaphandleni kwaye bavula indlela yokuphakanyiswa kwabo. Abavakhenkethi bafuna ngakumbi 'abasondelene' kunye 'noqhagamshelwano' kunye nabantu base-Odisha. Iiphakheji zetyelelo leeNtshontsho zeNtshonalanga zenzelwe ukulungiselela u-Odisha kunye namazwe angamakhelwane afana neJharkhand, iMadhya Pradesh, neChattisgarh ejikeleze i-panorama kwimizi kulezi zizwe ezibonisa iimbonakalo ezinqamlekileyo ezifana nemimandla yegadi, izitiya, ezithandekayo kwiindawo zeenduli, iintlobo zezindlu kunye nokufuduka iintaka, imithendeleko, iindwendwe .... kwaye uluhlu luphelele.